Soo-saareyaasha Sahayda Nadiifinta - Shiinaha Warshad & Alaab-qeybiyeyaal Nadiif ah
Nadiifinta Xogta Aluminium
Khaanadaha Qufulka Qufulka Elektarooniga ah
Kahor intaanu hawlwadeenku galin qolka nadiifka ah, hawo nadiif ah ayaa loo isticmaalaa in lagu afuufo walxaha wasakhda ah ee ku dheggan dusha sare ee dharkiisa, si looga hortago in siigada ay uga baxdo qubeyska hawada isla markaana loo yareeyo kharashka hawlgalka ee qolka isdaahirinta si wax ku ool ah. Iyadoo la hirgelinayo taageere laba-albaab leh oo isku-xidhaya iyada oo loo marayo dareenka sawir-koronto, waxaa loo oggol yahay inuu hagaajiyo waqtiga loogu talagalay qubeyska hawada, si loo galo otomaatigga bilowga ah. Halbeegga keliya ayaa loo isticmaali karaa, ama qaybo badan ayaa la isugu soo ururin karaa si loogu xiro ...
Nooca Bakaylaha Muraayadda Magnesium Laminboard
Nooca bakaylaha Muraayadda laydhka 'magnesium laminboard'. Ballad waxtar leh: 1150mm dhumucdiisuna: 50mm - 150mm (iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha) Length: Waxaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo baahida loo qabo adeegsadayaasha ugu dambeeya iyo baahida mashruuca. Waxyaabaha muhiimka ah: Glass magnesium core hollow, galaas dhagax weyn magnesium, xumbo magnesium galaas, malab malab galaas aluminium galaas, galaas malabka warqad galaas magnesium. Qaab dhismeedka kacsiga iyo adeegsiga: Wadajirka Rabbet. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa: looxyada gudaha iyo bannaanka si loogu nadiifiyo dhisme warshad ...
Albaabka Hawada Hawada ee Qolka Hawlgalka
Feature Taxanahaan naqshadeynta albaabka waxay kuxirantahay qaabeynta GMP iyo shuruudaha badbaadada. Waa albaab caadiya oo otomaatig ah iyo naqshad loogu talagalay qolka qalliinka ee isbitaalka, aagga qaybta isbitaalka, xanaanada carruurta. Xullo waxtarka sare mashiinka DC-ga ah ee aan lahayn burka leh cabbir yar, awood weyn, buuq yar iyo nolol dheer. Goomayaal daboolan oo tayo sare leh ayaa lagu dhajiyay hareeraha caleenta albaabka, oo u dhow gacmaha albaabka markii la xidhayo, iyada oo hawo hawo fiican leh. Nooca ikhtiyaarka ah Nooca doorashada ee guddi Sandwich ah Farsamada gacanta Farshaxanka gidaarka gidaarka dhumucdiisa (mm) ...
Carrabka iyo Groove Nooca Hollow Core MGO Board
Dusha sare waa darajo sare oo polyester, PVDF polyester iyo rinjiga fluororesin. Xaashida biraha wejiga ah waxaa loo isticmaali karaa xaashida galvanized, # 304 xaashida birta ah ee birta ah, xaashida aluminium-magnesium-managanese iyo xaashida aluminium. Sidaas darteed waxay leedahay anti-daxalka wanaagsan, aashitada, anti-crak, heerkulka iyo iska caabinta da'da. Qalabka udub dhexaadka u ah A-fasalka ololka u adkaysta (marka laga reebo malabka warqadda). Ma jiro wax dhalaalaya inta lagu jiro gubashada ama heerkulka sarreeya ee daadanaya. Sida badeecada xulashada koowaad o ...
Qulqulka Wareegga Tooska ah
Kaydka nadiifka ah ee hawada toosan wuxuu qaataa qaab socodka hawada mabaadii'da daahirinta ee socodka hal-dhinac oo toosan, kaas oo iskuxiraya taageere sanqadha yar-yar, kiiska cadaadiska taagan iyo shaandhaynta waxtarka sare ee qaab dhismeedka hal unug. Badeecadani waxay qaadan kartaa kursiga keydka si loo yareeyo saameynta gariirka.Waa nooc ka mid ah qalabka isdaahirinta hawada ee bixiya kala duwanaansho xoog leh oo loogu talagalay deegaanka nadiifka sare leh. Isticmaalka sheygan wuxuu hagaajin karaa xaaladaha nidaamka ...
Laminar pass-box waxaa loo isticmaalaa munaasabadaha xakamaynta nadaafadda, sida Xarunta Ka Hortagga Dhimashada, bio-pharmaceuticals, machadka cilmi baarista sayniska. Waa aalad kala soocid ah si looga hortago wasakheynta hawada wasakheynta qolalka nadiifka ah. Mabda'a hawlgalka: markasta oo albaabka fasalka hoose ee nadiifka ahi furan yahay, sanduuqa gudbintu wuxuu keenayaa qulqulka laminar iyo shaandhada qaybaha hawada ka baxa hawada goobta shaqada ee leh marawaxadda iyo HEPA, si loo hubiyo in hawada fasalka ka sarreeya ee nadiifta ahi yahay ma wada ...
Booth Miisaanka Cadaadiska xun
Waab miisaanka culeyska xun waa qalab nadiif ah oo maxalli ah, kaas oo inta badan lagu adeegsado miisaanka iyo isu-xirxirnaanta daawooyinka si looga hortago in budada caafimaadku ku fido ama aysan kor u qaadin, si looga fogaado waxyeelada neefsashada ee jirka bini'aadamka iyo in laga fogaado faddarada iskutallaabta u dhexeysa goobta shaqada iyo qol nadiif ah. Mabda'a Hawlgalka: Qaybaha hawada laga sifeeyey ee ka yimaada hawada goobta shaqada oo leh hawo, shaandhaynta waxtarka koowaad, shaandhada waxtarka dhexdhexaadka ah iyo HEPA, cadaadis taban oo miisaamaya sahayda waababka ...
Dhamaan Qalabka Sheybaarka Birta
Golaha wasiirrada ee dhammaan shaybaarka birta shaashadda waxaa si taxaddar leh loogu sameeyay go'yaal bir ah oo qabow leh oo roled ah iyada oo loo marayo taxane ah hawlo isku dhafan oo kala ah xiirashada, foorarsiga, alxamida, riixista iyo gubidda iyo iyada oo loo marayo daweynta daxalka-caabbinta budada epoxy. Waa biyo-la'aan, jeermis-dile, waana sahlan tahay in la nadiifiyo.